Musangano waVaMugabe, VaTsvangirai naVaMutambara Wogumbura MDC yaVaNcube
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vaita musangano neChishanu wekuyedza kugadzirisa mapisha pisha ari muhurumende yemubatanidzwa.
Asi musangano uyu unenge watopa kuti kunetsana kutonyanya muhurumende yemubatanidzwa sezvo mutungamiri mutsva weMDC diki, VaWelshman Ncube, vaudza Studio7 kuti vava kukwira kudare vachirizivisa kuti vatatu ava vanoti VaMugabe, VaTsvangirai naVaMutambara, vari kuzvidza mutongo wedare nekuita musangano uyu VaMutambara varipo.
VaNcube vati havasi kuziva kuti VaMutambara vange vakamirira ani mumusangano uyu. Munyori mukuru muMDC yaVaNcube, Amai Priscilla Misihairambwi-Mushonga, vakanyorera VaMugabe naVaTsvangirai tsamba vachivazivisa nezvemutongo wedare kuitira kuti bato ravo risamirirwa naVaMutambara mumusangano uyu.
Asi nyanzvi munyaya dzemitemo, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor Lovemore Madhuku, vaudzawo Studio7 kuti zvinonetsa kuendesa VaMugabe kumatare pasi pamutemo wenyika. Vati kuendesawo VaTsvangirai kunonetsa nekuti handivo vakoka musangano uyu.
VaMadhuku vakurudzira kuti VaNcube vayedze kugadzirisa nyaya iyi mugwara rezvematongerwo enyika.
Musangano weChishanu uyu wakabata nyaya dzemhirizhonga, sarudzo uye kuzadzikiswa uye kwechibvumirano cheGlobal Political Agreement. Mutauriri waVaTsvangirai, VaLuke Tamborinyoka, vanoti vatatu ava vakawiriirana kudaidza makurukota uye vakuru vemauto kuti vaone kuti vamisa zviri kunetsa.
Vari kutaura mazuva ano vakamirira chikwata chaVaMutambara, VaMorgan Changamire, vanoti zviri kutaurwa naVaNcube zvekuti VaMutambara vasapinde mumusangano uyu hazvina maturo.
Hurukuro naVaMorgan Changamire